युगसम्बाद साप्ताहिक - ‘काठमाडौँका सडक पासोमा परिणत भए’
Wednesday, 11.20.2019, 07:54pm (GMT+5.5) Home Contact
‘काठमाडौँका सडक पासोमा परिणत भए’
काठमाडौं उपत्यकाको सडक यतिबेला युद्धकालमा थापिएको पासो जस्तो बनेको छ । नियमित रुपमा हुनुपर्ने मर्मत सम्भार हुन नसकेको, सरकारी निकायबीच समन्वय हुन नसकेको तथा निर्माण व्यवसायीले तोकिएको समयमा काम नगरेकाले उपत्यकाका सडक ज्यानमारा बन्दै गएको छ ।
यस्तोमा व्यवस्थापिका–संसद्, सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकले काठमाडौँ उपत्यकाभित्रका सडक धरापमा परिणत भएकाले कमजोरी गर्ने निर्माण व्यवसायी तथा मर्मत सम्भारमा ध्यान नदिने सम्बद्ध निकायलाई कारबाही गर्न निर्देशन दिएको छ ।
समितिले भन्दै किन त्यस्तो भएको हो ? समस्याको समाधान कसरी हुन सक्छ ? किन कमजोरी भएको हो ? कति समयभित्र मर्मत हुन सक्छ ? लगायत जानकारी दिन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।
भक्तपुर नगरपालिकाका प्रमुख सुनिल प्रजापतिले संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयको आदेशको भरमा स्थानीय निकायलाई चलाउन खोजिएको भन्दै आपत्ति प्रकट गर्नुभयो ।